Abuuritaanka-verkkosivusto-ka WordPress waa sida dhisme guri leh leben Lego.
Waxaad aragtaa waxaad ja rabto inaad ku guuleysato, qeexdo qaybaha lagama maarmaanka ah, oo ka dhig dhammaan wadajirta dhulka. Hase-yeeshe, caqabada koowaad, si kastaba ha ahaatee, waxay hubineysaa in wax walba ay ku habboon yihiin si siman iyo si aan kala go ‘lahayn.
Tässä viestissä waxaan isbarbar dhigi doonaa sare FTP (File Transfer Protocol), macaamiisha aad u isticmaali kartaa boggaaga WordPress.
Waqtigii hore, horumariyayaashu waxay ubaahanayeen macaamil FTP ah si ay u faylaliyaan faylasha shabakadahooda shabakadooda waxayna ka dhigi karaan inay isticmaalaan dadka isticmaala – inay ka helaan hantida muuqaalka ilaa koodhka.
Maanta, dhammaan waxa aad u, älä halua inaad sameyso waa gigg u sameynta jaangooyada WordPress, soo qaado mawduuc, oo aad Abuurto nuxur adigoo adeegsanaya interface muuqaal ah. Waxa kale oo on fududahay in lagu tekee farsamooyinka iyo sii wado boggaaga adoo ka caawinaya plugins, mukana oo si toos ah loogu rakibay bakhaarka rasmiga ah ee WordPress.
Ilaa inta aad kashaqeyneyso koodhka oo ays hayso ilahaaga cusub, CMS waa inay awoodaan inay fuliyaan hawlahaas sida saacadaha shaqada. Laakiin haddii aad tahay nooca horumariye ee jecel fikradaha banaanka-ka-sareeya iyo koritaanka maxkamadaynta iyo qaladka, adiga waxay la kulmi kartaa khaladaadka qaarkood taas ayaa kaa xiri doonta CMS-gaaga. Tani waxay kaa saari doontaa ikhtiyaar la’aan laakiin inaad isticmaasho macaamil FTP ah oo vaha ka qabato arinta gacanta.
Iyadoo, äskettäin, niin kuin te yaala macaamiisha sare ee FTP, kun olet kirjoittanut WordPressin tekstin:
Jiid-iyo-Jooji-kirjanmerkit – Xayaysiinta waa muuqaal hän on saanut ah oo tai sahli kara horumarinta inay diyaariyaan xisaabtooda FTP. Iyada oo CyberDuck ah, muuqaalka buuggu wuxuu isticmaalaa jiidis iyo kala-dhex-dhexaad ah – si sahlan loo isticmaalo heerarka cusub.
Cryptomator – Sabab kale oo loo CyooDuck, joka on SFTP (Secure SSH File Transfer Protocol) -tapahtuma. Laakiin xitaa haddii aad rabto inaad la socoto FTP, waxaad wali ku sugi kartaa xogtaada Cryptomator app, taas oo kuukauden ogolaaneysa inaad abuurto waraaqo codsi ah oo ku saabsan server kasta oo kasta ama hannaanka kaydinta daruuriga.
Aqalka-baari – FTP bilaash ah ayaa ku yimaada barta xaalad-dhab ah oo bandhigaysa hannaan joogto ah iyo sidoo kale macluumaadka ku saabsan faylka hadda la doortay. Tani waxay kaa horjoogsataa inaad wax ka beddesho, tirtirto, ama aad u guurto faylal badan oo shil ah.
Samee ZIP-arkisto – Haddii aad u baahato inaad boggaaga, waxaad ka faa’iideysan kartaa faylka hal-fure "Ilmainen FTP" si uu u abuuro nuqullo ZIP ah oo loo diro wadooyinka maxalliga ah. Tani waxay hubineysaa inaad si dhakhso ah uga soo kaban kartid qaladaadka iyo faylasha khalkhalka leh.
Maamulaha Guryaha – FileZilla wuxuu la shaqeeyaa maamulaha goobta oo kuu ogolaanaya inaad keydiso macluumaadka boggaaga FTP. Waxay leedahay ikhtiyaari ah sisällä Xiri karo xirmooyinka FTP, iyadoo la adeegsanayo aqoonsiyada login, iyo tilmaamida xiriirada SFTP.
Xaddidaadda Xawaaraha Khaaska ah – Haddii aad ka walwalsan tahay wareejinta FTP ee mashquulsan dhammaan xawaaraha internet-ka, waxaad dejin kartaa xaddidaadaha xawaareynta ee ka dhex socota bogga dejimaha FileZilla. Si fudud u tag ‘edit’> ‘Asetukset’> ‘Beddelka’ oo calaamadi "U oggolow xaddidaadaha xawaaraha".
Selain-Ku Saleysan – Adiga oo ah fidiye dheeraad ah, waxaad bilaabi kartaa isticmaalka Firaaqada Firfircoonida dhexdeeda. Kaliya waxaad ku dari kartaa isku-tooska tooska ah ee maktabadda fidinta dheeraadka ah ee Firefox-ka, waana fiican tahay inaad tagto.
Isku xirka iyo dib udhigelinta tooska ah – Haddii on dhacdo inaad lumiso xiriirka ku-meel-gaadhka ah, FireFTP ja kaikki muut ah ah ayey u cusbooneysiisaa marka ugu horreysa ee xiriirinta internetka dib loo dhiso.
Raadinta Fudud iyo -suodattimet – Interface FireFTP waxaa ka keskellä ah baaritaan isku mid ah iyo fiilisuodatin mukana oo ku samaeya laybereeriyada gudaha iyo kan fogba isla markiiba. Waxay taageertaa xaddiga raadinta ee horumarsan sida calaamad bannaan (–) loogu talagalay ka-reebista faylka, calaamaddaha dheeraadka ah (+) alaabta näköala yahay, iyo qiimaha ("") raadinta kalmado badan.
Xawaaladaha Xawaaladaha – Macaamilka FTP ee Premium, gudbinta 4 wuxuu kufaraa xawaaraha sare ee gudbinta faylalka, kaas oo saacidaya qiyaasaha 4 ee faylasha yar yar yar ee 30 000. Macmiilku wuxuu kaloo isticmaalaa wareejinta isku xirka badan, taas oo sahlaysa la dhaqaajiyo tiro fara badan oo faylasha ah iyada oo aan xawaaraynin.
Mukautetut kuvakkeet – Tani waxay noqon kartaa mid muuqaal ah, laakiin gudbin kaukaa ayaa kuu oggolaaneysa inaad isticmaasho sawirro gaar ah oo loogu talagalay "kuwa ugu cadcad".
Sida bilawga adduunka ee macaamiisha FTP, mukaan lukien FireFTP tyylillä CyberDuck ayaa ah kuwa ugu murugsan fursadaha ugu wanaagsan. Ma aha oo kaliya inay fududahay in la isticmaalo, waxay wali bixiyaan sifooyin gaar ah oo loogu talagalay dadka isticmaala bilaashka ah. FTP lacag la’aan ah sidoo kale waa doorasho fiican oo bilawga ah, laakiin kaliya haddii aadan daneynin vaha kale oo aan ahayn marka aad galiso server-kaaga FTP.
Farsamayaasha webka ee khibradaha leh, dhinaca kale, waxay heli kartaa FileZilla oo waxtar leh madaama ay taageereyso mashiinnada badan. Ugu dambeyntiina, mulkiilayaasha bogagga oo Hore u haystay gigabytes ee xogta online, ka dibna gudbin 4 waxay ku siinaysaa bangiga ugu fiican ee buck.
Abuuritaanka– ს ვებ – გვერდი, რომელიც WordPress– ს აქვს, შეგიძლიათ გამოიყენოთ Lego leben Lego.
VPN- ის მრავალრიცხოვანი გამოყენება: როგორ შეიძლება VPN სასარგებლო იყოს
ניהול משתמשים בתוך מסד הנתונים של MySQL עם phpMyAdmin
Ahoana no Mamorona tranonkala Kupon a WordPress-hez?
Codáil do Kids: Clatch Scratch
כיצד להתקין וורדפרס באופן מקומי במחשבי Windows או Mac שלך
შეადარეთ WordPress– ის ტოპ 5 ფორუმის მოდული
Comment Chuck Gumbert utilise les techniques de pilote de chasse pour réussir en affaires et dans la vie